के तपाईमा पनि गोलीगाँठो मर्काइको समस्या छ ? यसरी पार्नुहोस् ठिक – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/के तपाईमा पनि गोलीगाँठो मर्काइको समस्या छ ? यसरी पार्नुहोस् ठिक
के तपाईमा पनि गोलीगाँठो मर्काइको समस्या छ ? यसरी पार्नुहोस् ठिक
काठमाडौँ। गोलीगाँठो एक यस्तो जोर्नी हो, जहाँ खुट्टा र पैतालाका हड्डीहरुको मेल हुन्छ। यी हड्डीहरुलाई हड्डी जोड्ने तन्तु अर्थात लिगामेन्टहरूले यथास्थितमा राख्न मद्दत गर्दछन्। गोलीगाँठो मर्काइ यस्तो चोट हो, जुन हिँड्दा, खेल्दा, दौडिँदा, नाच्दा खुट्टाको सन्तुलन विग्रिएर अप्ठ्यारो तरीकाले मर्किने वा घुम्ने गर्दछ।
यस्तो अवस्थामा हड्डीहरुलाई जोड्ने लिगामेन्टहरु तन्किने वा च्यातिने गर्दछ। गोलीगाँठो मर्काइको उपचार चोटको गम्भीरतामा निर्भर गर्दछ । यद्यपि स्वयं हेरचाहका उपायहरुले यसलाई ठिक पार्न सकिन्छ, तर चोट गम्भीरताअनुसार चिकित्सकहरुको परामर्श समेत लिनुपर्ने हुन्छ।
गोलीगाँठो मर्काइका लक्षणहरू-अत्याधिक पिडा वा दुखाई, गोलीगाँठो आसपासमा सुन्निनु पिल्सनु, गोलीगाँठो सहि तरिकाले हल्लाउन नसक्नु
यसको स्याहार कसरी गर्ने ?
एक्स–रे गर्ने- दुखेको गोलीगाँठोलाई सहारा प्रदान गर्न स्प्लिन्ट वा ब्यान्डेजको प्रयोग गर्ने
दुखाई कम गर्ने औषधि खाने-गोलीगाँठो मर्किएको पहिलो दुई दिन पैतालालाई आफ्नो मुटुको स्तरभन्दा माथि उठाएर राख्ने। यसो गर्नाले दुखाई तथा सुन्निनेपना कम भएर जान्छ
मर्किएको १ देखि २ दिनसम्म गोलीगाँठोमा प्रत्येक १ देखि २ घण्टामा बरफ लगाउने। बरफ लगाउँदा बरफलाई प्लास्टिकमा राखी तौलिया वा कपडाले बेरेर लगाउनुहोस्, जसले गर्दा बरफ प्रत्यक्षरुपमा छालाको सम्पर्कमा आउँदैन।मर्किएको २४ घण्टासम्म पैतालाले भुइँमा नटेक्नुहोस् बिस्तारै दुखेको गोलीगाँठोवाला पैतालाले हल्कारुपमा टेकेर हिड्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि पीडा धेरै छ भने हिँड्दा वा उभिँदा लौरो वा वैसाखीको सहारा लिनुहोस्।
कस्तो अवस्थामा चिकित्सक कहाँ जाने ?
गोलीगाँठो मर्काइलाई हुन त सामन्यारुपमा लिन सकिन्छ तर चोटको गम्भीरतालाई हेरेर चिकित्सकसँगको परामर्शको आवश्यक पर्दछ। यदि चोट, सुन्निने वा दखाइ बढ्नेक्रम ज्यादा भए र चोट लागेको पैताला छुँदा चिसोपन र औंलाहरु बोधो वा निला भए चिकित्सकबाट उचित उपचार लिनुपर्दछ।